ပထမနှစ်တန်းများနှင့် အခြားအတန်းများ ဖွင့်လှစ်ရန် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်နေ - Myanmar Pressphoto Agency
Education MPA Myanmar Yangon
Education October 1, 2021 ·0Comment
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည် လာမည့်နိုဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာအတွင်း တက္ကသိုလ်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည် ဆယ်တန်းအောင်မြင်ထားပြီးသူများ တက်ရောက်ရန် ပထမနှစ်တန်းခွဲများနှင့် အခြားကျန်ရှိသည့်တန်းခွဲများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်း လက်ရှိ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေသည့် တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ဆရာမအသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရသည်။
“ဆရာမတို့သင်ရိုးအစည်းအဝေးတွေ ပြန်လုပ်လာတယ်။ ပြီးတော့ ကျောင်းမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦးတွေ ပြင်ဆင်မှုတွေရှိတယ်။ ဒါတွေထက် သင်ရိုးပြင်ခိုင်းနေပြီ၊ ရာထူးတိုးပြောင်းတွေရှိနေပြီဆိုတော့ မကြာခင်မှာ ပြန်ဖွင့်မယ့်သဘောတွေရှိပါတယ်” ဟု တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ ဆရာမတစ်ဦး ကဆိုသည်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည် ကျောင်းများပြန်ဖွင့်ရန်အတွက် ဩဂုတ်လအတွင်းတွင် စီစဉ်ထားသော်လည်း ကိုဗစ်အခြေအနေများကြောင့် နောက်ဆုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလအတွင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူသတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးက MPAသို့ပြောသည်။
“စာက၈လပိုင်းမှ ဖွင့်ဖို့စာထုတ်ပြီးသား ကိုဗစ်ကြောင့်၂လနောက်ဆုတ်ထားမယ်ပြောထားတာတော့ရှိတယ်။ အခုလက်ရှိအထိတော့ဘာသံမှမကြားဘူး ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
မေလအတွင်းက တက္ကသိုလ် စတုတ္ထနှစ်ဘွဲ့ကြိုတန်းနှင့် ဘွဲ့လွန်တန်းများကို ၆ပတ်ကြာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး စာမေးပွဲများ စစ်ဆေးကာ ဩဂုတ်လအတွင်းက အောင်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကျောင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သော်လည်း တက်ရောက်သူ အနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပြီး ကျောင်းသားအများစုမှာ CDMလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ပြီး ကျောင်းတက်ရောက်ခြင်း မပြုခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
နိုဝင်ဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးကလေးများအပါအဝင် လက်ကျန်အတန်းများကို ဖွင့်လှစ်ရန်ပြင်ဆင်မှုများ ရှိသော်လည်း အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပက်သက်ပြီး တစုံတရာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
တက္ကသိုလ်များ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည့်အပေါ်တွင် “ကျနော်တို့ကတော့ ကျောင်းတက်သွားဖို့မရှိပါဘူး။ ကျောင်းမှာ ကျနော်တို့တက်လည်း ကျနော်ဆရာဆရာမတွေ သူငယ်ချင်းတွေ လူစုံတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ဆုံးနှစ်က အစ်ကိုအစ်မတွေတောင် ရင်းထားကြသေးတာ ကျနော်တို့လည်း တက်ဖို့မရှိပါဘူး” ဟု ပထမနှစ်တက်ရောက်နေဆဲကျောင်းသားတစ်ဦးကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းမှု ကျူးလွန်သည့်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှစတင်ပြီး ပညာရေးဝန်ထမ်းဖြစ်သည့် ဆရာဆရာမများမှာ CDMလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့််ကျင်ကြောင်း ပြသခဲ့ကြသည်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည် လက်ရှိအချိန်တွင် နိုင်ငံနှင့်အဝှမ်း သတ်ဖြတ်မှုများ ပြုလုပ်နေပြီး သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူများထဲတွင် ဆရာဆရာမများ၊ ကျောင်းသားလူငယ်များပါဝင်သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း(AAPP)က စက်တင်ဘာလ၃၀ရက်နေ့အထိ ထုတ်ပြန်ထားသော စာရင်းများအရ စစ်တပ်သည်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ၁,၁၀၀ကျော်ကို သတ်ဖြတ်ထားပြီး ၈၄၀၀ကျော်ကို ဖမ်းဆီးထားသည်။
SAC Prepares to Open First Year Class and Others Classes
The terrorist military is preparing to reopen universities in coming November and December.
The terrorist SAC is reportedly in the process of preparing to reopen first year classes for those who have already passed the matriculation and efforts are also being made to reopen other classes, according to currently serving university professors’ community.
“We’re resuming meetings on new curricula. Next, there are renovations for school buildings. We’ve been told to rewrite the curricula. As there are position promotions, it’s likely to reopen soon”, saidaprofessor fromauniversity.
Even though the terrorist military tried to reopen schools in August, it had to be postponed due to COVID conditions and it is planned to reopen in October, said one resource who wishes to remain anonymous to MPA.
“The letter had been issued to reopen in August. It was also said it would be postponed two months due to COVID. But nothing has been heard so far,” the person said.
Exams were held for university fourth year students and post-graduate classes in May, after six weeks of opening and pass lists were issued in August. Even though schools were opened, there were onlyafew students as most students joined CDM by not going to schools.
Even though there are preparations for reopening classes in November and December, including for fresh high school graduates, no comment about it was received when the Department of Higher Education was contacted.
Regarding reopening universities, “We have no plan to attend. There won’t be our friends and teachers anymore even if I would go. Even the final year students sacrificedalot, we have no plan to go,” saidacurrent first year university student.
In Myanmar, since the terrorist military coup on February 1st, education personnel, teachers, have joined CDM and are resisting the military dictator showing they are against him.
At the moment, the terrorist military is committing murders across the country and among the killed are school teachers and students as well.
According to the Amnesty Association for Political Prisoners (AAPP), the military has killed over 1100 innocent civilians and arrested over 8400 as of September 30.
#TerroristMilitary #PreparedToReopenUniversity #MPA